Lahatsoratry ny famolavolana tena ilaina | Famoronana an-tserasera
Rachael Ashe tamin'ny fihaonambeny "Manao tanana"
ny fanadihadiana fanadihadiana izy ireo dia fomba tsara hianarana hevi-baovao, hijerena fomba fijery hafa amin'ny lohahevitra iray, na hisaintsainana ny fidiran'ny matihanina malaza hafa. Be fanabeazana izy ireo, ary safidy tsara hijerena ireo tolakandro tsy misy orana izay ny drafitra tokana tadiavinao dia ilay fantatra amin'ny anarana hoe "lamba firakotra sy sofa".
Avy eto dia mamporisika anao aho mba hijanona, fa tsy hijery an'io toko io izay miandry ny andian-tantara tianao (na ny sarimihetsika amin'izao fotoana izao), manaova lavaka ho an'ny fanadihadiana fanadihadiana mahaliana momba ny endrika izay namboariko ho anao rehetra. Raha mila lahatsoratra hafa toa ity ianao, miaraka amin'ny fanadihadiana sy lahateny maro hafa, aza misalasala mangataka izany ao anatin'ireo fanehoan-kevitra.
Lahatsary fanadihadiana (sy lahateny)
Helvetica: io ilay fanadihadiana, PAR tsara indrindra. Tsy maintsy jerena ny mpamorona, satria sarimihetsika mahaleo tena izy Typography, graphic design y kolontsaina hita maso. Fandraisana anjara tena mahaliana amin'ny fanadihadiana nataona mpamorona malaza. Izay voalaza: ilaina mba hahitana azy.
Bika matoanteny: fanadihadiana momba ny famolavolana indostrialy. Izy io dia mandinika ny zavatra sy ny fizotry ny famoronana an'ny mpamorona: manomboka amin'ny borosy nify ka hatramin'ny gadget malaza indrindra.
Ireto tovolahy hafakely avy any Barcelona ireto: Noforonina roa taona lasa lasa tetikasa diplaoma farany, ity fanadihadiana ity dia miresaka ny toe-javatra misy ny endrika any Barcelona. Ao anatin'izany, matihanina amina endrika maro no manome antsika ny heviny momba ny fivoaran'ny sehatra ao amin'ity tanàna ity sy izay antenain'izy ireo hitranga amin'ny ho avy.
Stefan sagmeister: Stefan Sagmeister sy Jessica Walsh miresaka amin'ity fanadihadiana ity momba ny asany sy ny asany fizotry ny famoronana. Na dia amin'ny teny Anglisy aza izy io dia mendrika ny hanaovana ezaka ny fahitana azy.
Manao tanana: Rachael Ashe miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fanaovana zavatra ny tananao sy ny taratasinao. Ny asany tao anatin'izay taona faramparany dia nifantoka tamin'ny famoronana sary sokitra amina taratasy ho fitaovana. Amin'ny teny anglisy ihany koa.
Inona no atao hoe famolavolana sary?: Lahatsary fanadihadiana arzantina izay misy mpampianatra, matihanina ary manam-pahaizana manandrana mamaritra ny "endrika sary" izy ireo. Mipetraka ny fanontaniana mahaliana ary fanadihadiana iray no hampisehoantsika taratra.
Ny revolisiona virtoaly "Ny vidin'ny maimaim-poana": fanadihadiana fanadihadiana mahaliana izay milaza amintsika mazava tsara momba maimaim-poana amin'ny internet. Tena afaka ve izany? Tsy misy vidiny ve ny mpampiasa? Angamba tsy ara-toekarena, fa ara-tsaina: ho takalon'ny tranonkala dia mahazo ny fanirianay, ny eritreritsika ... Jereo izany.
Influencers: fanadihadiana fohy izay manadihady ny atao hoe olona manan-kery sy ny fomba fironana famoronana, lamaody na mozika, dia lasa mifindra izy ireo.
Tsy misy sary famantarana: Lahatsary fanadihadiana nataon'i Naomi Klein, miorina amin'ny mpivarotra mitovy anarana aminy, mifandraika amin'ny fiantraikan'ny marika eo amin'ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina.
Fanabeazana voarara: horonantsary fanadihadiana izay manolo-kevitra ny hamerina ireo tolo-kevitra sy fomba fanao mifandraika amin'ny fanabeazana a fomba fijery tsy mitovy, asehoy ireo zavatra niainany izay sahy nanova ny firafitry ny maodelim-panabeazana ny sekoly nentim-paharazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mamolavola fanadihadiana izay tokony ho hitanao
Armando Filos dia hoy izy:
Tena mahaliana ny hevitrao. Amin'ity fomba ity dia avelanao hisy hafa hitohy hitombo ary indrindra ny tenako. Misaotra Ah, andefaso hatrany aho na apetraho ireo fanadihadiana na rakitra PDF bebe kokoa hamaky sy hanohizana, amin'izay hanatsara ny fahalalako ...
Mamaly an'i Armando Filos
Misaotra anao tamin'ny hevitrao Armando. Avy eo aho hanohy hanao lisitra lahateny sy kaonferansa mahaliana hafa ho an'ny mpamorona :)